Uvavanyo lwefibre optic yovavanyo olungundoqo -iYuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Uvavanyo lwefayibha yokujonga okungaphakathi kuqhubeka yi-Optical Time Domain Reflectometer (OTDR). Sisiphi isixhobo esisetyenziselwa ukukhangela ngokuchanekileyo iziphene kwikhonkco lefayibha ebonakalayo yenethiwekhi zonxibelelwano. I-OTDR ivelisa ukubetha ngaphakathi kwifayibha ukuvavanywa kweziphene okanye iziphene. Iziganeko ezahlukileyo ngaphakathi kwifayibha zenza ukusasazeka kukaRayleigh emva. Iipulses zibuyiselwa kwi-OTDR kwaye amandla abo alinganiswa aze abalwe njengomsebenzi wexesha kwaye kwenziwe iyelenqe njengomsebenzi wolule ifayibha. Amandla kunye nomqondiso obuyiselweyo uxela ngendawo kunye nobungakanani bempazamo ekhoyo. Ayisiyolondolozo kuphela, kodwa kunye neenkonzo zokufakelwa kwemigca ebonakalayo zisebenzisa ii-OTDRs.
I-OTDR iluncedo ekuvavanyeni ukuthembeka kweentambo zefayibha. Ingangqinisisa ukulahleka kwe-splice, ukulinganisa ubude kunye nokufumana iimpazamo. I-OTDR ikwasetyenziswa ngokuqhelekileyo ukwenza "umfanekiso" wentambo ye-fiber optic xa isandula ukufakwa. Emva kwexesha, uthelekiso lunokwenziwa phakathi komkhondo wokuqala kunye nomkhondo wesibini owenziwe xa kuvela iingxaki. Ukuhlalutya umkhondo we-OTDR uhlala usenziwa lula ngokuba namaxwebhu asuka kulwazi lwangaphambili olwenziweyo xa kwakufakwa intambo. I-OTDR ikubonisa apho iintambo zipheliswa khona kwaye uqinisekise umgangatho weefayibha, unxibelelwano kunye neespisi. Umkhondo we-OTDR ukwasetyenziselwa ukusombulula ingxaki, kuba banokubonisa apho ikhefu likwi-fiber xa umkhondo uthelekiswa namaxwebhu wofakelo.
UJera uqhubeke novavanyo lwee-FTTH zokulahla iintambo kwii-wavelengths (1310,1550 kunye ne-1625 nm). Sisebenzisa i-OTDR YOKOGAWA AQ 1200 kolu vavanyo lomgangatho. Ukuphonononga umgangatho weentambo zethu ukuqinisekisa ukuba umthengi wethu unokufumana iimveliso ezihlangabezana neemfuno zomgangatho.
Senza olu vavanyo kuzo zonke iintambo esizivelisayo.
Ilabhoratri yethu yangaphakathi iyakwazi ukuqhubeka noluhlu lweemvavanyo ezinxulumene nomgangatho.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya.